Ukondla nini iintlanzi | Ngeentlanzi
Iintlanzi zizilwanyana abaceli kutya Kwaye, ukuba awuyijongi i-aquarium, emva kokuqhela ukuyibona njengenye into endlwini, umhla ungafika xa ulibale ukondla iintlanzi kwaye ungazi ukuba zilungile okanye zimbi.
Ukuthetha inyani, ukungabaniki usuku okanye ezimbini ukuba batye akulunganga kakhulu kuba iintlanzi ziyabambelela (nangona kufuneka ulumke kuba banokuhlaselwa xa belambile kwaye baphela belahlekelwa). Nangona kunjalo, mhlawumbi ukondliwa kweentlanzi yinto leyo Akufanele ulandele ishedyuli engqongqo.
Arquivet Aqua Fría 105 ...
Tetra Pond Iibhloka 4 L ...
I-BPS 10 Iingceba zokutya...
Ngokuqhelekileyo iintlanzi yitya ngamaxesha ahlukeneyo emini. Kukho abo babanika ukutya amatyeli aliqela (funda apha indlela yokulungiselela ukutya kwasekhaya okuloba) Kodwa abanye bayilahla kube kanye ngemini kuba bayazi ukuba ukutya kuhlala emhlabeni kwaye emva koko bakutya kancinci kancinci.
Ukukhumbula ixesha lokuyondla, eyona nto intle ukuyenza yile Beka loo msebenzi kwinto oyenzayo yonke imihla. Umzekelo, phambi kokuba uye emsebenzini, okanye ukuphuma kwesikolo, ukuba ngabantwana abondla iintlanzi. Ukwenza imihla ngemihla iba ngumkhwa kwaye kulula ukukhumbula ukubondla.
Liliphi elona xesha lilungileyo?
Itshaja ye-USB yeZacro...
Ukuthetha inyani akukho xesha lichanekileyo nangona amava am ndiza kukuxelela ukuba, ebusuku, abadli ngokutya kakhulu kwaye kuncinci ukuba akukho kukhanya. Bakhetha ukulinda kusasa ngengomso ukuze batye kunasebusuku.
Into yokuqala kusasa (kusasa) bahlala betya ngokukhawuleza (kwaye ke ngaloo ndlela benza amanzi angcolile). Ndingacebisa ngelo xesha ukunqanda ukutya ukutya ixesha elide emanzini (ezinye iintlanzi azikuthandi).
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Ukutya iintlanzi » Ungayondla nini intlanzi